Mavara muChirungu - UniProyecta
Kudzidza mavara muChirungu kunogona kuve nyore kana kuoma, zvinoenderana nekugona kwemunhu wega wega. Panyaya yevana, mutauro uyu unonzwisisika, sezvo panguva yekukura kwavo vane mukana wakakura wekuwana ruzivo rutsva, mune ino, Chirungu. Kune rimwe divi, kune mashoma kesi apo vanhu vakuru vanodzidza zvizere mutauro wechipiri unonyanya kutaurwa munyika.
Zvisinei, dzidza mavara muchirungu Iri basa riri nyore uye hazvizotora nguva yako yakawanda, unogona kana kudzidza zvishoma kuburikidza neInternet kuburikidza nemapeji akasarudzika mumutauro uyu.
Kana isu tichiedza kudzidza nezve chimwe chinhu chitsva uye chisingazivikanwe, nzira yakanakisa yekutanga ndeye matanho mashoma. Mune uno mukana, ziva nhamba, mazuva evhiki, arufabheti uye iyo mavara muChirungu iyo imwe nzira yakanaka. Nechikonzero ichi, nhasi tichakudzidzisa kunyora nekutaura matoni akasiyana nenzira kwayo, kuti uzive Chirungu:
1 Mavara ekutanga
2 Sekondari mavara
3 Kutumidzwa (Vhidhiyo)
Kuti iwe unzwisise, unofanirwa kunyatsonzwisisa fomura iyi: Ruvara muChirungu (mataurirwo + eSpanish):
(Blu - Bhuruu)
(Dzvuku - Dzvuku)
(Yelou - Yero)
Wakawana zviri nyore here? Edza yechipiri mavara e edza kuti unoita sei nemadudzirwo aro.
Iko kusanganisa kunobva mumusanganiswa weyero nebhuruu:
(Kumenya - Girini)
Iko kusanganisa kunobva mumusanganiswa wezvitsvuku nebhuruu:
(Purple - Pepuru)
Mune dzimwe nyika, ruvara rwepepuru rwunozivikanwa se "violet", saka kune aya kesi:
Iko kusanganisa kunouya kubva musanganiswa yeyero uye tsvuku:
(Oransh - Orange kana Orange)
Pano tinokusiya iwe a vhidhiyo nerwiyo rwemavara yevana.
Kudzidza ruzivo rutsva hakufanirwe kunge kwakaomaPane kupokana, kana iwe uchikwanisa kuziva zvishoma zvishoma mune imwe nzira ine hunyanzvi, ruzivo runogara nekusingaperi mune yako cerebro.
Kana iwe waifunga ichi ndicho chete chinhu iwe chaunofanirwa kuziva nezvacho mavara muChirungu, iwe wakanganisa zvachose. Kufanana nekudzidza kwese, panogara paine chimwe chinhu chitsva chekudzidza, asi, zvine chekuita nemavara iwo huwandu hwakawanda kwazvo, asi paunenge uchidzidza, iwe unozodzidza zvakawanda zvakawanda pamusoro pemutauro uyu, kuwedzera kune akasiyana matoni.
Pakati pevamwe mavara makuru kuti iwe uzive ndeizvi:
(Guait - Muchena)
(Blac - Nhema)
Hapana zvikonzero! Fara dzidza chirungu, nekuti paunenge uchiziva zvese, iwe uchazoda kuziva mazwi matsva mumutauro uno zvakakosha kuti utaure.
Nakidzwa, zviri nyore kwazvo !!
kudzidziswa » Mitauro » Shona » Mavara acho muChirungu